« Tsy maintsy tafarina ny lemak’i Marovoay, ary tsy maintsy haverina ny maha-sopitra faharoa azy eto Mdagasikara » | Région Boeny
Io no nambaran’ny Ministry ny Fambolena, Ravatomanga Roland tany Marovoay ny Zoma 08 mai lasa teo, raha nitokana ireo ezaka nataon’ny ministera tany an-toerana ny tenany, niaraka tamin’ny delegasiona teknikan’ny ministera maromaro, notron’ny Talen’ny fandraharahana ankapoben’ny Lafintany eto Boeny, Atoa Bazezy Vanombe Clavelah, izay nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra.
Fanarenana tata-drano mirefy 10km, fanomezana fitaovam-pambolena isan-karazany toy ny ragiragy sy angadinomby, motoculteurs, sy zezika ary masomboly roa taonina, niampy birao vaovao roa ao amin’ny Kaomina Tsararano sy Ambolomoty, hiasan’ny federasion’ny tantsaha: ireo no ezaka fanombohana izany fanamby lehibe ho an’I Marovoay izay nataon’ny Ministry ny Fambolena izany.
Raha tsiahivina hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Marovoay Atoa Navony Sahoby dia i Marovoay no faharoa taorian’Alaotra tamin’ny voka-bary manerana an’i Madagasikara. Tantara ihany nefa izany sisa hoy izy fa ny zava-misy ankehitriny ao Marovoay, dia ao anatin’ny fahasimbana tanteraka ny tanimbary anarivony hekitara maro ao an-toerana. Nohazavainy fa vokatry ny kaohin-drika manjo ireo nofon-tany amin’ireo sahandriaka manodidina ny lemak’i Marovoay dia tototry ny atsanga sy ny fasika ireo tanimbary ary tototra toy izany koa ireo lakan-drano manondraka ireo tanimbary sisa velona, ka zara raha mahazo rano.
Vokatry ny ranobe nandritra ny asara farany teo dia niampy trotraka nefa ny fahavoazana ho an’ireo mpamboly vary tao Marovoay tamin’ity taona ity, araka ny tatitra nampitain’ity solombavambahoaka ity tany amin’ny ministeran’ny Fambolena.
Tsy nihambahamba aho hoy Atoa Ravatomanga Roland, Ministry ny fambolena, nanoloana ny fahavoazan’i Marovoay, ka nandray fepetra manokana ho vonjy rano vaky hamaliana ny fitarainan’ireo tantsaha mpamboly ao an-toerana. Fanamby kosa no apetrako hoy ihany izy fa «Tsy maintsy tafarina ny lemak’i Marovoay ary tsy maintsy haverina ny maha-sopitra faharoa azy eto Madagasikara.»
In’efatra mahavoka-bary ny lemak’i Marovoay ao anatin’ny taom-pambolena iray hoy ny Talem-paritry ny Fampandrosoana ny Fambolena eto Boeny, Atoa Andriamiarinera Hajanirina Serge, dia ny vary asara, ny vary hatriatry, ny vary dimby alotra, ary ny vary jeby. Anatin’ny mikarakara ny fambolena vary Jeby ny mpamboly ao ankehitriny. Ka maherin’ny 4000 ha ny velaran-tanimbary ao Tsararano sy Ambolomoty, no hahazo rano ara-dalàna rehefa vita tanteraka ny fanarenana ity tata-drano nasiam-panamboarana ity.
Tsy misy fifaliana lehibe ho anay mihoatra ny hoe vita ny adi-rano hoy ny tantsaha, satria ho vokatra ny vary ary ho voky izahay.
Nanafatrafatra azy ireo kosa ny solotenan’ny Lehiben’ny Faritra, mba hikajy ny zava-bita sy hahay hamaly fitia amin’ny alàlan’ny fanatsarana ny vokatra.